FLV waa qaab file in inta badan loo isticmaalaa in qof huwan files warbaahinta u samaynta isticmaalka iyaga ka mid ah oo internet ah. Files warbaahinta ayaa sheegay in inta badan la heli karaa internet-ka loogu geeyo online sidoo kale u dajinta, inta badan waa qaab FLV. Simple oo u fudud in ay geliyaan oo xarun u download doorashada ugu horeysay ka dhigaa. FLV waxaa inta badan loo arkaa Flash Video laakiin Flash dhabta video leeyahay laba qaabab: mid waa FLV taageera qaab web yar oo kale waa F4V ka hadlaya inta badan la files warbaahinta macruufka ku salaysan. MP4 sidoo kale waa weel si ay u fuliyaan faylasha sida waxa FLV ah sameeya. In kasta oo la wadaago qaar ka mid ah muuqaalada aasaasiga ah iyo hawlaha ay ka dalbaan, labada FLV iyo MP4 leeyihiin qaar ka mid ah muuqaalada distinguised kuwaas oo hoos ku qoran marka la barbar dhigo.
Qeybta 1: FLV vs MP4, FLV farqiga u dhexeeya iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo FLV
Developer Waxaa la horumariyo nidaamka Adobe laakiin fikradda dhismaha ugu weyn waxaa loo keenay in ay Macromedia ah. Waa qaab multimedia oo horumarsan Ururka Caalamiga ah ee jaango'an ah.
Taariikhda Sanadkii 2002, Flash si toos ah oo ay taageerayaan Player faylasha Qaabka Web yaryar. Laakiin sanadkii 2003, Adobe sameeyey qaar ka mid ah isbedel ka hor iyo ugu dambeyntii la yimid qaab FLV ah oo taageera kasta audio, video iyo qaar ka mid ah qoraalka gudbiyo aad. Flash ayaa Player 7 taageertaa qaab FLV, si sax ah. Sannadkii 2007, shirkad Adobe abuuray qaar ka mid ah qaabab file cusub oo ay ku jiraan files kala duwan gudaha. Sanadkii 1999, MPEG 4-waxaa la daabacay by horumarinta iyo dib u eegis ah oo ka mid ah qaab waxaas la sameeyey sanadkii 2001. Sanadkii 2003 taas Quick Time Qaabka File waxaa sii modified ka dibna foomka kama dambays ah oo ah qaab MP4 soo galay jiritaanka. MP4 dhab ahaantii taageertaa mar ku salaysan ee files warbaahinta. Kordhin file The kaas oo la standardly isticmaalo waa ".mp4". Kororsi kale oo badan waa .m4a, .m4b, .m4r iyo qaar badan.
Caanka FLV hadda waa mid aad loo jecel yahay ee online media ka qabashada files. Ku dhowaad dhammaan websites isticmaalayso FLV ama kale Flash qaabab video. Goobaha ugu caansan oo la isticmaalayo qaab FLV waa: Yahoo, Videos, Reuters, YouTube, VEVO, Hulu iyo Metacafe. Tani waa mid ka mid ah qaabka ugu caansan ee loo isticmaalo hoorto files warbaahinta, audio iyo video labadaba. Format waxaa loo isticmaalaa shirkadaha badan oo caan ah. Ku dhowaad meel kasta oo loo isticmaalo qaab this. Apple Inc. waa la isticmaalayo qaabab MP4 dhammaan faylasha ay warbaahinta. Inta badan qalabka warbaahinta ayaa taageeraya qaab loogu talogalay files ay.
Durdurrada Data Geeyo Data dhacdaa RTMP. Server ee Flash warbaahinta-4.5 whixh u ogolaanaya xogta hoorto iPad iyo iPhone. Noocyada xogta barta ay qaab file FLV ka mid ah: Audio, videos iyo qoraalka. Qaabka dhab ahaantii waa weel ay ku jiraan file a waxaa gudaha. MP4 ayaa qeexay audio iyo video files waxa gudaha oo xanbaarsan yahay in ay caga final oo ay maamushaa faylka si sax ah iyo si habsami leh. Waxaa inta badan waa Mudanayaasha a il gaar loo leeyahay. Waxa kale oo ay leeyihiin subtitles waxaa gudaha. Waxa loo isticmaalaa macluumaadka riixo u websites, waayo, CD-yada, DVD-yada iyo si ay u gudbiyaan files music on qalab kale.
Metadata Qaab FLV inta badan xambaarsan files warbaahinta. Sidaas, sida qaabab badan File kale waxaa kale oo uu leeyahay metadata in waa ku khasab faylka. Sida caadiga ah pack ugu horeysay ee uu ka kooban yahay macluumaadka xogta Meta. Taariikhda Tani Meta inta badan ku saabsan tahay videos iyo files audio. Taariikhda Meta ku jira weelka FLV waa width oo sarajooggeeduna (sabayn dhibcood pixels), duration (ee seconds), sirta, madax dheeraad ah, loox iyo heerka jir muhiimka ah (loox kasta labaad).
File MP4 ka kooban yahay dhammaan macluumaadka loo baahan yahay oo ku saabsan file warbaahinta. Qaab MP4 waa hodan ku ah labada: xogta Meta dhismaha iyo sharaxa. Sida weel uu ka kooban yahay dhammaan macluumaadka dhisme ah oo ku saabsan video, looxyadii ku gudbay, xawaaraha, muddada waqtiga, pixels iyo kuwa kale. Waxa kale oo ku jira faahfaahinta sharaxayaa sida subtitles iyo macluumaad track. Tani waxay ka caawisaa si faahfaahsan file hore ee saxda ah loo hawlgeliyo markii ay ciyaareen qalab ama loo isticmaalo internetka daawadayaasha.
Faa'iido 1. FLV waa weel, taas oo uu leeyahay file Jabbuuti oo waxaa gudaha. Jabbuuti oo u taagan tahay qaab web yar. Sidaas, FLV ku jira faylasha video yar oo ka dhigaysa in laga heli karo internet-ka.
2. FLV caawisaa in Jabbuuti oo koombiyuutarka fudud, dajinta iyo geeyo online at websites kala duwan. Waxay yaraynaysaa waqtiga loo baahan yahay in ay hawlahan ku dhammeeyaan. Tani waa faa'iido weyn oo qaab file FLV ah. 1. Ku dhawaad ​​qalab kasta oo ciyaaryahan fiican ayuu u ogyahay oo ku saabsan qaab file this.
2. Waad beddeli kartaa qaab file ka .mp4 in .mpg oo waa mid fudud oo si sahlan.
3. Looma baahna in wax kasta oo plugin iyo codec in ay sii wadaan qaab fudud.
Qasaarooyinka 1. FLV uu leeyahay arrimaha qaar ka mid ah halka la daadan AAC ama H.264. Noocan ah xaddidaadda ka dhigaysa in ay adag tahay in la format FLV jir ah u shaqeeyaan.
2. Halkan yimaado baahan yahay naqshad cusub oo dheeraad ah oo horumaray ay si fiican u shaqeeyaan. Sidaas, hadda adobe waxaa soo koraya ay qaab file hadda jira si ay u taageeraan H. ee 264 iyo inay jiraan dadaallo lagu hormarinayo tayada shaqo geeyo ah. Marka laga reebo caan ah, qaab file tani arrimaha qaar in ay yihiin inta badan ay la kulmaan dadka isticmaala ku. Kuwani waa kuwa hoos ku siiyo:
1. Waxaa inta badan ma Tifaftirayaasha file oo degan meel yara weyn marka loo eego qaab kale file warbaahinta.
2. Waxa loo baahan yahay meel u weyn oo in ay sii files leh qaabab MP4.
U isticmaala in ay The users ugu caansan waxaa ka mid ah Yahoo, Videos, Reuters, YouTube, VEVO, Hulu iyo Metacafe. Qaab MP4 waa mid aad u fiican u waafaqsan yahay dhammaan hababka qalliinka sida Mac, Android, Windows iyo aaladaha kale ee macruufka.
1. Rakibaadda (Video qaabab)
Qaabka File 2. MacroMedia Flash FLV Video
1. MP4 ama FLV (Faa'iidooyinka iyo K)
2. Adobe Flash Video sooc Qaabka File
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo FLV?
MP4 iyo FLV jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo FLV isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo FLV video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama FLV inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya MP4 ama file FLV in aad rabto in aad kala soo bixi. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli karto MP4 tayada ugu wanaagsan iyo files FLV ah.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 in la Flv adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "FLV".
Talaabada 5 Play faylka FLV bixi
> Resource > MP4 > FLV vs MP4, FLV farqiga u dhexeeya iyo MP4